Villa Ny volavola dia mampiasa teknikan'ny famolavolana fifandanjana ara-dalàna ho toy ny aix mba hampitana ny fiheverana ny zavakanto tatsinanana. Izy io dia mandray singa amin'ny volotsangana, orkide, voninkazo ary voninkazo. Ny efijery tsotra dia noforonina tamin'ny fanitarana ny endrika volotsangana tamin'ny alàlan'ny fanesorana ny endrika simenitra ary nijanona teo amin'izay tokony hijanonany. Ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny efitrano fisakafoana ambony sy ambany dia mamaritra ny fetran'ny habakabaka ary maneho ny haben'ny prospect oriental izay somary lava sy patchwork. Manodidina ny lohahevitry ny fiainana tsotra sy mandeha mora foana, mazava ny tsipika mihetsika, fanandramana vaovao ho an'ny tontolo iainan'ny olona izany.
Alakamisy 12 Aogositra 2021
Trano Ity trano fonenana ity dia misy trano 4 misy rihana telo misy trano ambany kokoa ary mijoro eo amin'ilay toerana akaikin'ny afovoan-tanàna. Ny kisi-kazo sedera manodidina ny ivelan'trano dia miaro ny tsiambaratelo ary tsy manakana ny fahasimban'ny vatana manangana noho ny hazavan'ny masoandro mivantana. Na dia amin'ny drafitra tsotra toradroa aza, ny 3D-fanamboarana vita amin'ny alàlan'ny fampifandraisana zaridaina tsy miankina isan-karazany, ny efitrano sy ny tohatra tsirairay dia mitarika amin'ny famahanana ny habetsak'ity trano ity. Ny fiovan'ny faran'ny zana-kazo sy ny zara voafehy dia mety hamela ity trano ity hitohy ho voajanahary ary hifangaro amin'ny fanovana vetivety ao an-tanàna.
Alarobia 11 Aogositra 2021
Fianakaviana Fivarotana Funlife Plaza dia toeram-pivarotana lehibe ho an'ny fotoana fialam-boly sy fanabeazana ho an'ny ankizy. Tanjona ny hamorona lalantsara fiaran-dalamby hahafahan'ny ankizy mitaingina fiara mandritra ny fiantsenana ataon'ny ray aman-dreny, trano hazo iray ho an'ny ankizy mijery sy milalao ao anatiny, valindrihana "lego" misy anarana mall miafina hanaitaitra ny eritreritry ny ankizy. Fototra fotsy tsotra misy mena, mavo ary manga, avelao ny ankizy hanao sary sy handoko azy amin'ny rindrina, ny gorodona ary ny trano fidiovana!
Talata 10 Aogositra 2021
Alatsinainy 9 Aogositra 2021
Showroom Showroom: Ao amin'ny efitrano fampisehoana, kiraro fanatanjahantena sy fitaovana fanatanjahantena, izay namboarina niaraka tamin'ny teknolojia tsindrona. Ilay toerana dia toa vita amin'ny fanamboarana lasitra tsindrona. Ao amin'ny fomba fanamboarana io toerana io, ny fanaka toy ny fanangonana miaraka amin'ny famolavolana tsindrona mba hiteraka iray manontolo. Ireo làlan-jiro manjaitra izay eo am-bavony, manalefaka ny fahitana ara-teknolojika rehetra.
Bisikileta & Efitrano Fampisehoana
Alahady 8 Aogositra 2021
Bisikileta & Efitrano Fampisehoana Ny fivarotana mampidi-doza dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny smallna, studio iray famolavolana sy ny alikaola novokarin'i Piotr Płoski. Niteraka fanamby maro ilay asa, satria ny boutique dia hita eo amin'ny rihana faharoa amin'ny trano tenona, tsy misy varavarankely fivarotana ary manana 80km monja ny faritra. Eto dia tonga ny hevitra hampiakatra ny faritra, amin'ny fampiasana ireo habaka eo amin'ny valin-drihana ary koa ny efitrano gorodona. Ny rivo-piainana mandray aina sy ny trano no tanterahina, na dia mihantona eo ambonin'ilay valaly aza ny fanaka. Ny fivarotana mampidi-doza dia natao hanohitra ny fitsipika rehetra (izany aza dia manohitra ny fitotonganana). Hita taratra tanteraka ny toe-tsaina an'ny marika.
Electra Faucets Asabotsy 18 Septambra
Osoro Ny Rafi-Panokatra Misokatra Zoma 17 Septambra
Coca-Cola Tet 2014 Karazana Fonosana Malefaka Alakamisy 16 Septambra
Villa Trano Fianakaviana Fivarotana Ny Endrika Anatiny Showroom Bisikileta & Efitrano Fampisehoana